विश्वकप २०१८ को विजेता को होला ? विगतको इतिहासले यस्तो भन्छ – Medianp
विश्वकप २०१८ को विजेता को होला ? विगतको इतिहासले यस्तो भन्छ
Media NPप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ३१, २०७५०८:४१0
रुसमा आयोजित विश्वकप २०१८ मा बत्तीस राष्ट्र सहभागी हुँदैछन्। तिनमध्ये एउटा टोली विजेता हुनेछ। तर तपाईँ केका आधारमा विजेताको पूर्वानुमान गर्नुहुन्छ? विगतका प्रतियोगितामा देखिएको प्रवृत्ति र तथ्याङ्कको विश्लेषण गरेर बीबीसी स्पोर्टले ३१ वटा टोलीलाई हटाएर विश्वविजेताको उपाधि कसको पोल्टामा जाला भनेर निष्कर्ष निकालेको छ।
यहाँ सन् २०१८ विश्वकप जित्नेले गर्नुपर्ने कुरामा र उसमा हुनुपर्ने गुणहरूको चर्चा गरिएको छ।
सन् १९९८ मा विश्वकप ३२ टोलीमा विस्तार भएपछि वरियतामा परेकाहरू टोलीहरू नै विजेता बनेका छन्। सन् १९८६ मा डिएगो म्याराडोना र उनको ‘ईश्वरीय हात’ को सहयोगमा विश्वकप जित्दा आर्जेन्टिना वरियतामा थिएन।
संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया वा दक्षिण अफ्रिका कसैले पनि विश्वकप जित्लान् भन्ने सोचिएको थिएन। सन् १९९० मा इटली, सन् २००६ मा जर्मनी र चार वर्षअघि ब्राजिलमा विश्वकप खेलिएको थियो। तर आयोजक हुँदैमा उनीहरू लाभ भएन।
बत्तीसवटा टोलीबीच प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि पाँच विजेताले खेलेका आफ्ना सात खेलमा चारभन्दा बढी गोल खाएका छैनन्। हामीले छानेर बाँकी रहेका सात टोलीमध्ये पोलन्डको रक्षापङ्क्ति सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ। छनोट चरणमा उसले प्रतिखेल १.४ गोल खाएको थियो।
वास्तवमा विश्वकप विजेताको निर्धारण गोलरक्षकद्वारा हुन्छ। विगतका पाँच ‘गोल्डन ग्लोभ’ पुरस्कारमध्ये चारवटा आफ्नो टोलीलाई विश्वकपको उपाधि दिलाउने उत्कृष्ट गोलरक्षकले पाएका छन्।
बाँकी रहेका चार टोलीबाट यसपालि मानुएल नोयर (जर्मनी), युग्यो ल्योरिस (फ्रान्स) र टिबो कोट्वा (बेल्जियम) मध्ये एक जना उत्कृष्ट गोलरक्षक ठहरिन्छन् भनेर सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ। पोर्चुगलका रोई पेत्रिसियो चाहिँ गोल्डन ग्लोभको स्पर्धामा छन् देखिँदैनन्।
तर रसियामा पुन: विजय हासिल गर्न भने इतिहास जर्मनीको अनुकूल छैन। अब एउटै टोली बाँकी रह्यो।
त्यसको अर्थ बेल्जियम विश्वकप विजेता बन्दैछ। अरूले नजिते सम्म। जुन सम्भव छ…